WhatsApp inogamuchira yekuvandudza kukuru, idzi ndidzo nhau | IPhone nhau
WhatsApp inogamuchira yekuvandudza kukuru, idzi ndidzo nhau
Miguel Hernandez | | iPhone, Noticias, dzakawanda
Vakomana vanobva paWhatsApp kubva zvakatengwa neFacebook vari kuisa mabhatiri, uye nenzira ipi. Gore rino rapfuura ivo vakatipa isu yekuwedzera kwesarudzo uye meseji zvisati zvamboonekwa neboka reWhatsApp.Inc, yekupedzisira iri maminetsi mashoma apfuura. Iyi yekuvandudza inounza akateedzana enhau dzinonakidza, idzo zhinji dzevashandisi vanga voda kupopota. Isu tinokuudza kuti ndeapi mashoko eiyo WhatsApp yekuvandudza.
Tinogona kutanga neyekutanga yenhau, yakasarudzika chiziviso yekumisikidza yega yega yemataurirwo, zvisinei nekuti ndeemunhu kana muboka, tinogona kunyaradza hurukuro. Uye zvakare, kana tikatsvedza munwe wedu kurudyi kubva kune yakajairwa menyu pamusoro pechata, tinogona kusarudza pakati pekumaka sekuverengwa kana kusaverengwa kune chero hurukuro, iyo inodzivirira nhaurirano dzisingaperi dzinobuda nekuda kwekufara kwekuita kwebhuruu tick.
Chimwe chitsva ndechekuti isu tinogona pakupedzisira chengeta mavhidhiyo mune edu WhatsApp backups, basa rakanga risingawanikwe kare, nekuti makopi ekuchengetedza enhaurwa aingobvumidzwa kuchengetedza hurukuro nemifananidzo. Iri basa rinogona kumisikidzwa kubva kuZvirongwa> Nhaurwa uye kufona> Kopa machats. Kune rimwe divi, rutsigiro neIzwiOver rakagadziridzwa kubvumidza ruzivo rwakawanda uye rwakagadzikana. Ivo zvakare vakakwanirisa iyo sisitimu yekugovana vanofambidzana kubva kune vanobata kunyorera, pamwe nenzvimbo dzakananga kubva kuApple Mapplication application. Kune rimwe divi tinaro iro basa rakamirirwa kwenguva refu iro rinotibvumidza isu kuchengetedza data kana tichifona kuburikidza neWhatsApp, kunyangwe zvichiripo kuti zvionekwe kuti izvi zvinokanganisa sei yatove isina kukwana WhatsApp yekufona system.
Kana zviri zvekubatanidza mashandiro, hatichazofaniri kumanikidza anofara «bhatanikurodha mamwe mameseji«, Sezvo ivo vachizotakurirwa otomatiki, zvinozoita kuti zvive nyore kufamba pakati pavo mukutaurirana kwenguva refu. Chikamu chemufananidzo uye vhidhiyo yekugadzirisa zvakare chakawana kumeso uye iyo thumbnail yenzvimbo yakagovaniswa yakawedzerwa. Usazeze kugadzirisa iyi vhezheni yeWhatsApp, hauzombozvidemba. Kunyange zvakadaro, Isu hatisati taziva chero chinhu nezve WhatsApp Webhu, inoratidzika kunge iri nzira refu, tisingataure nyaya yemhinduro yekukurumidza muzviziviso zvavanoramba kuita nekuda kwezvikonzero zvatisingazive.
Isu takamirirawo kuziva kana izvi zvishandiso zvitsva zvichakanganisa mashandiro echishandiso pane iyo iPhone uye kunyanya kana iko kushandiswa kwebhatiri kwakawedzerwa. Kunyange zvakadaro, chiitiko chikuru chinotarisirwa mukati memwedzi unopfuura nekuuya kweIOS 9, asi neizvi kubva paWhatsApp haungazive, saka hatifanire kushamisika kuona kuti havaunze chero nyowani nyowani kwemimwe mwedzi mitanhatu.
Chii Chitsva muVhezheni 2.12.5
• Custom ziviso marongero uye kunyarara kunowanikwa mune yega yega chat
• Iye zvino unogona kusanganisira mavhidhiyo muma backups ako. Enda kuZvirongwa> Chats uye mafoni> Kopa machats
Maka makau seasina kuverenga kana sekuverengwa (Rova zvakasimba kubva kuruboshwe uchienda kurudyi paChats screen)
Kuvandudzwa kwekutsigirwa kwe VoiceOver
• Goverana mazita kubva kuApple app uye ugovane nzvimbo dzakananga kubva kuApple Mepu kuenda kuWhatsApp
• Dzikisa kushandiswa kwedata rinoshandiswa panguva yeWhatsApp kufona muZvirongwa> Chats uye mafoni
• Paunenge uchitsvaga chat, mameseji apfuura anotakura otomatiki
Maitiro ari nani ekucheka mafoto nemavhidhiyo
• Mamessage ane nzvimbo ane thumbnail yemepu yakakura
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » WhatsApp inogamuchira yekuvandudza kukuru, idzi ndidzo nhau
Ing Maximo Daniel De Los Santos akadaro
Iwe unowana dzinenge zvese asi kwete iyo yekukurumidza mhinduro.
Pindura kuna Ing Maximo Daniel De Los Santos
Mauri Cardenas akadaro
Izvi zvinoreva kuti ichave ichiwanikwa neIOS9 chete
Pindura Mauri Cardenas
Oliver Garcia akadaro
Zvechitatu-bato maapplication haugone kusvika ios 9 ini ndinofunga
Pindura kuna Oliver García
Hongu c inogona jailbreak asi haina kuchengeteka.
Ndine beta 4 yeIOS 9 netariro. Kana iri yekuchimbidza, ndiko kunyorera kwandinoshandisa zvakanyanya.
Hahaha ndinoseka "Big update" here?
Kana ichinge yawiriraniswa nePC, nharembozha uye piritsi "ndizivise" icho chingave chiri "Chakanaka kuvandudza" uye sekungofanana nekutaura kune vanobata vasina kupa foni yavo ... neiri nyore "alias" kana "zita remadunhurirwa"
Ini handisi kuzovandudza chero chinhu nekuti ini ndakango chidzima uye ndicho chinhu chakanakisa chandakaita.
Handizive kuti nei iwe uchipa kukosha kwakanyanya kuchikumbiro chakadai ... nekuda kwekuti vanhu vazhinji vanacho, hazvireve kuti ndicho chakanakisa ...
Hi Marc, ichokwadi kuvandudzwa kukuru. Kuti iko kunyorera hakufadze iwe sevamwe vazhinji ndechimwe chinhu.
Iyo inopihwa kukosha kwakakodzera, sezvo chiri chishandiso chinogara chiri muTop 3 yemahara muApp Store uye iyo inoshandisa zvakanyanya zuva nezuva. Tinofanira kuva nechinangwa, uye kana vanhu vakaitevera, inhau.
Takaita zvisingaverengeke zvinyorwa zvekurumbidza kukwikwidza kunyorera. Ivo vese vane zvayakanakira nezvayakaipira.
Isu hatikwanisi kupindura kumeseji kubva kukiya rakakiiwa kana kubva kune chimwe chikumbiro. Chii chinoputsa mazai.
Pindura kuna Matutevip
Ionfrehley (@ionfrehley) akadaro
Iko iMessage iyi iri nani, kana zvisiri, Teregiramu chirongwa chepamusoro.
Pindura kune ionfrehley (@ionfrehley)
teregiramu yakanaka chero bedzi vasingatumire gif -_-
Mhinduro yekukurumidza ichiri kushayikwa, kubva kuziviso senge iMessage.
Uye iyo apuro tarisa kana kutumidza zita racho
Iyo app yakanaka kwazvo. Ivo vanofanirwa kuwedzera vhidhiyo kufona kwairi.
Iyo yakawanda roll nemawachi uye hapana kesi yekubheja ini ndichaipa ino kupera kwaGunyana uye kana ikasatengesa pasina izvozvo haina basa
Sergio Blacutt Anokanganisa akadaro
Isu hatisati taziva chero chinhu nezve WhatsApp Web .., nekuti riinhi..¡¡¡¡¡
Pindura Sergio Blacutt Crooker
Marco Octavio Sánchez Uribe akadaro
Unorevei? Ini ndinogara ndichishandisa WhatsApp pamakumbo angu
Pindura Marco Octavio Sánchez Uribe
Paindaneti neiyo iPhone…?
haina kuvhura pane yangu iphone neiyi yekuvandudza
Alex Gutierrez akadaro
Uye zvewatch, ko zvei ???
Pindura kuna Alex Gutierrez
Juan Mateo García Ramírez akadaro
Uye hapana yetsika tsika ...
Pindura kuna Juan Mateo García Ramírez
Zvinogona !! Ini ndaigona kutozviita !!!
Fernelis Ranger Agramonte Filpo akadaro
Ungashandisa sei whatsapp paWatch?
Pindura Fernelis Ranger Agramonte Filpo
Zvakanaka, kushandisa izwi rairo sezvaunoita neimassege saka haufanire kutora iyo iPhone kuti upindure kuti mutsara unoshanda sei? paApple Watch
Zvekurinda handisati ndazviona. Nenzira, ndanga ndave nayo kwevhiki dze3 uye ndakakwanisa kuzvibvisa. Ndakaitenga nekuda kwekuravira kwangu zvigadzirwa zveApple uye zvakandinyadzisa nenzira isina mumwe. Kunze kwekurohwa kwazvinotora uye iyo skrini inokwenya (Apple tarisa mutambo)
Mune ino blog vanyori vese vanopa vanonyora "pamusoro pezvose" zvisizvo. Vakaparadzaniswa vanababa.
Chaizvoizvo kuodza moyo, hapana nezve Apple Watch ... Hapana "chitsva" icho Teregiramu isina kumboita kwenguva yakareba, tisingataure kuti Teregiramu inogona kutoshandiswa kubva kuApple Watch ... Vanhu vachanzwisisa riini kuti WhatsApp haina kutosvika pamakumbo avo kuTeregiramu ...
Mauricio D. Gonzalez Garcia akadaro
Pasina mubvunzo JB achidya rairo kuWhatsApp neiyo tweak yemhinduro dzinokurumidza, kunyangwe ivo vanogadzira vari kurwira kuwana iyo mod
Pindura kuna Mauricio D. Gonzalez Garcia
Zzario Hawking Valdivia Rosales akadaro
Pindura Zzario Hawking Valdivia Rosales
Chinhu chekufora hurukuro sekuverengwa hazviite kuti matikiti asashanduke bhuruu, kuitira kuti vagadzirise iko kukanganisa!
Pamberi apo shamwari yaive neapp yakavharwa uye ikamutumira meseji, ini ndaizowana kuti havana kumusvikira, kana vachitoita, ndiko kuti "✔️". Asi neiyi yekuvandudza, kunyangwe shamwari yangu WA app yakavharwa, ini ndatoona "✔️✔️" yakanaka yekuvandudza
Ms na Ms_
Teregiramu uye Teregiramu. Ini ndinonzwisisa kuti kune vanhu muWas, ndinosarudza kuti varambe varipo uye varege kuenda kuTel iyo inonakidza kune vega uye nehunyanzvi. Izvi zviri kunyatsoita basa, zvakachengeteka uye multiplatform inoshamisa.
Zvino izvo zvekuravira mavara.
Pindura kuna jl3507
Avo vedu vari kudzima machats izvozvi VERY heavy….
ZVIKURU ZVAKAITIKA ?? Kupi ?? ha ha ha ha ha ha
Teregiramu makore akareruka kure neWhatsApp. Zvakaipa WhatsApp haina kuuya gare gare ...
Alberto Cordoba Carmona akadaro
Nhau zhinji asi bhatiri rinoshandiswa harigadzirise (ndine Iphone5) Ngavadzidze kubva kuTeregiramu
Pindura Alberto Córdoba Carmona
Ndeipi tweak iriko mucydia yekukurumidza mhinduro yewhatsapp?
Yakachipa Apple Tambo tambo? iyi sarudzo yakanaka
Maitiro ekugovana internet uye shandisa Instant Hotspot muIOS 8 kana gare gare